နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လူနေအိမ် Safe > အိမ်လုံခြုံ
* အရွယ်အစား: H800 * W475 * D430mm
* Lock: မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်
* အထူ - တံခါး - 10 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် -4mm
* 30mm အစိုင်အခဲသံမဏိ bolt
ပုံစံ ပြင်ပအရွယ်အစား (MM) နေရာချထားခြင်း n.w.
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး စင် အဈန့် (ကီလိုဂရမ်)
LS-320 320 380 310 1 ပေ035
LS-420 420 380 310 1 ပေ043
LS-470 470 380 350 ပေ01 51
LS-1500 1500 635 565 သုံး 1 238
1. အစိုင်အခဲသံမဏိလုံခြုံသေတ္တာ - LS စီးရီး။ အရောင်2အရောင် - အညိုရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရှိသည်။
2. LCD display နှင့်အတူ 2. အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်။ အတွင်းပိုင်းချိန်ညှိဖန်လိုင်း။ တံခါးနောက်ကွယ်မှတစ်ခုချိတ်။ သင်သော့နှင့်အခြားအရာတို့ကိုဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။
3. အောက်ခြေမှာလျှို့ဝှက် mezzanine ။ တံခါးသည် 10 မီလီမီတာအထူဖြစ်သည်။ 30 မီလီမီတာအချင်းအစိုင်အခဲသံမဏိ Bolt ။ အောက်ခြေမှာဘီးလေးဘီး။
4. LS-320 ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်နှင့်အတူ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်နှင့်အတူ LS-600 ။ လက်ဗွေနှင့်အတူ LS-470 ။ လက်ဗွေနှင့်အတူ LS-600 ။ လျှို့ဝှက် mezzanine ။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* အရွယ်အစား: H670 * W440 * D390mm* Lock: ဖန်သားပြင်ဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* အထူ: တံခါး - 10 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် -4mm* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိ bolt* MP-320 မှ လွဲ. ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောကက်ဘိနက်ငယ်လေး& MP-400* အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အနီရောင်ခလုတ်* 4pcs AA ဘက်ထရီ